Global Voices teny Malagasy » Fanovana Ny Fandaharam-pianarana Any Indonezia, Mibahan-toerana Kokoa Ny Finoana, Ary Mihena Ny Siansa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Septambra 2013 17:33 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika miora
Sokajy: Azia Atsinanana, Indonezia, Fanabeazana, Fitantanam-pitondrana, Politika, Tanora
Vao haingana izay i Indonezia no nametraka fanovana ny fandaharam-pianarana  tany amin'ireo sekoly miisa 6000, izay nitarika fihetsehana  avy hatrany noho ny tsy fahampian'ny fiomanana sy ny fanaisorana ny Siansa, ny Anglisy ary ny Teknolojia Fampahalalam-baovao (IT) ho taranja mitokana.
Tany amin'ny fanabeazana fototra, nahena ho taranja 6 ireo taranja 11 raha nampitomboana ho 30 ora kosa ny ora fianarana isan-kerinandro raha 26 ora izany taloha. Natambatra tamin'ireo taranja laharam-pahamehana tahaka ny fianarana teny Bahasa Indoneziana, ny fitiavan-tanindrazana sy ireo fianarana ara-pinoana ny fianarana ny teny Anglisy sy ny siansa. Ho an'ny fandalinam-pinoana ireo ora roa fanampiny. Any amin'ny ambaratonga ambony, noterena hiditra ao amin'ny fikambanan'ny sikoto nasionaly ireo mpianatra ho an'ny hetsika ivelan'ny fianarana.
Ireo mpianatra any amin'ny fanabeazana fototra ao Indonezia. Sary avy ao amin'ny pejin'i Abdul Rahman ao amin'ny Flickr (CC License)
Natao hampivoarana ny “fahatakaran'ny tanora ny fitsipi-pitondran-tena sy ny andraikiny eo amin'ny fiaraha-monina” ny fifantohana  amin'ny fampianarana fahaiza-miaina sy fandalinam-pinoana. Natao indrindra ireo fanavaozana ireo mba hahatonga ireo mpianatra “hahay handefitra sy ho tia filaminana” noho ny olana mitombo amin'ny herisetra hita any amin'ireo toeram-pianarana.
Nisy ihany koa ireo fomba fampianarana vaovao nampahafantarina ankoatra ny fanandratana ny fandaharam-pianarana izay mampiasa ny fomba “fampidirana lohahevitra”.
Mamintina  ny zavatra hita ao anatin'ilay fanovana ny fandaharam-pianarana i Mirzatus Solikhah:
Mameno ireto singan'ny fampianarana manaraka ireto io fandaharam-pianarana vaovao io: fahalalana, traikefa, ary fitondran-tena. Ny fahalalana dia voaporofon'ny lesona amin'ny ankapobeny. Ny traikefa dia avy amin'ireo taranja misy fampiharana tahaka ny fanatanjahan-tena ary ny fitondran-tena kosa dia mitaratra amin'ny alalan'ny fametrahana fotoana fanampiny ho an'ny taranja ara-pinoana.
Ny fiantraikany mihatra avy hatrany dia mety ho ny fanalàna ireo mpampianatra Anglisy sy IT:
Mety ho very asa ireo mpampianatra Anglisy sy IT (Teknolojia Fampahalalam-baovao).
Mba hahalavorary ireo fanovàna vaovao ireo, tsy maintsy miatrika ireto olana manaraka ireto ny governemanta:
Misy zavatra goavana telo tsy maintsy amboarina fara-faharatsiny. Izany dia ny boky fampianarana, ny fanofanana mpampianatra, ary ny fitantanana ny fampianarana.
Nefa nitaraina ireo mpampianatra fa nomena fanofanana dimy andro fotsiny izy ireo. Voatatitra avy any amin'ireo faritany maro ihany koa ny fahalanian'ny boky fampianarana. Nahafantatra  izany olana izany tamin'ny alalan'ny gazety tao an-toerana i Jennifer:
Vao namoaka ny gazety taty an-toerana androany fa tsy nahazo boky fampianarana akory ny ankamaroan'ireo mpianatra any amin'ireo sekoly voakasik'izany. Rehefa nanontaniana ny minisitera dia izao no navaliny: mba mikarokaroka ny saina, tadiavo ao anaty aterineto ireo fitaovana, ary anaovy dika mitovy izy ireny!
Faly i M. Faruq Ubaidillah fa hanome fotoana betsaka kokoa  ho an'ireo mpianatra hifantohany amina taranja vitsivitsy kokoa ireo fanovana ireo:
…hitarika ireo mpianatra handany ny fotoanany amin'ny fomba tsara sy raitra izany hetsika izany mandritra ny zotran'ny fampianarana sy ny fianarana. Tsy mila mifantoka amina taranja maro loatra izay hanahiran-tsaina azy fotsiny izy ireo. Tsy aleo aza ve manana taranja vitsy sy fifantohana ambony toy izay maro nefa tsy misy fifantohana. Ambonin'izay, azo ianarana ivelan'ny ora any an-tsekoly ny Anglisy.
Fa tsy nanaiky ny fanaisorana  ny Siansa sy ny Anglisy ho taranja mitokana kosa i Harry Wardana:
Raha mijery ny ankamaroan'ireo firenena mivoatra ianao, tena manome toerana mibahana ho an'ny fivoaran'ny siansa sy ny teknolojia izy ireo. Mino izy ireo fa hamerina izay nofinofisin'ny firenena iray ny firoson'ny fetran'ny siansa. Ary mampalahelo fa tsy miray feo amin'izany ny governemantantsika, na ara-bakiteny na ara-kevitra.
Endrika ara-tsaina tena mampalahelo.
Mino ihany koa i Thalia fa singa tena ilaina  amin'ny fanabeazana fototra ireo taranja naisorina ireo:
Mametraka ny fitondran-tena ho ambony noho ny traikefa sy ny fahalalana ny fandaharam-pianarana 2013.
Manontany tena aho raha adinon'ny governemanta fa raha te-hahatratra ny hoavy mamiratra dia tsy maintsy arahan'ny fahalalana ny fitondran-tena. Ankoatra izay, tena ilaina amin'ny fivoaran'ny ankizy ireo taranja ireo.
Manontany i Agita Sesara raha vonona hametraka ireo fanovana samihafa ireo ao anatin'ny fandaharam-potoana vaovao ny governemanta sy ireo toeram-pianarana:
…Ho fiovana hatrany ifotony ity. Tsy resaka fanaisorana taranja fotsiny ihany, fa fanovana tanteraka ny fomba fampianaran'ireo vondrona mpampianatra amin'izao fotoana. Hahay hifehy izany fanovana izany ve ireo mpampianatra?
Vonona hiatrehana izany ve ireo fitaovana rehetra sy ny mpiasa voakasiky ny fampianarana? Raha tsia ny valiny, dia tsy ho inona fa hetsika poak'aty fotsiny io fiovana io.
Manonona  ireo fiampangana nataon'ireo vondrona sasany ny Fampianarana Iraisam-pirenena 2012 fa hoe natao ireo fanovana ireo mba hanamarinana ny fanolorana fotokevitra ara-pinoana betsaka kokoa ao anatin'ny fandaharam-pianarana:
…mihevitra ireo mpitsikera io soso-kevitra io fa tsy vahaolana ny fanovana ny fandaharam-pianarana. Manahy ireo mpampianatra sasany fa manamaivana ilay olana ny governemanta sy ireo mpitarika ara-pinoana ary mampiasa fomba fiteny tahaka ny “fanamboarana ny fitondran-tena” sy ny “toe-tsaina” mba hanamarinana ny fampitomboana ny fanabeazana ara-pinoana.
Angamba mba hampitoniana ireo tsikera, nianiana hanatanteraka “Fitsapan-kevitra mikasika io fandaharam-pianarana io” ny governemanta amin'ny volana ambony mba haminavinana ny fiantraikan'ireo fanovana. Nanome fanohanana ara-bola amboniny ihany koa izy ho an'ny fanofanana ireo mpampianatra amin'ny fanomanana ny fampiharana ireo fanovana ireo manerana ny firenena amin'ny herintaona.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/09/08/51012/
 fanovana ny fandaharam-pianarana: http://www.thejakartapost.com/news/2013/02/19/future-indonesia-depends-new-curriculum-minister.html
 fanavaozana : http://www.thejakartaglobe.com/news/govt-launches-new-curriculum-amid-textbook-shortage/
 hanome fotoana betsaka kokoa: http://faruqubaidillah.wordpress.com/2013/06/11/implementing-new-curriculum-is-it-a-good-way-to-do/
 vonona : http://heydiaspora.com/on-indonesias-curriculum-change/
 nianiana : http://www.thejakartaglobe.com/news/fsgi-presses-govt-to-evaluate-new-school-curriculum/
 fanofanana : http://www.thejakartaglobe.com/news/govt-to-train-1-7-million-teachers-in-new-curriculum/